Bichar Khabar » जमिन राज्यको हुनु पर्छ
जमिन राज्यको हुनु पर्छ
23 Nov 2018 04:11:26 PM | No Comments
रविन्द्र श्रेष्ठ ,मंसिर ५ गते बुधबार अर्थमन्त्रीले एक कार्यक्रममा जमिन निजी सम्पति नभई भोगाधिकार मात्र हुनुपर्ने बताउनु भयो । उहाँको भनाइ थियो ‘जमिनमा कसैको स्वामित्व हुँदा सबै क्षेत्रमा लागत बढ्यो । विकास निर्माण, वित्तीय स्थायित्वलगायत सबै क्षेत्रमा समस्यै समस्या भयो । विकास निर्माणको काममा राज्यले कति जमिन किन्ने ? कति मुआब्जा दिइरहने ?’
उहाँले जमिनमा निजी स्वामित्व नभई भोगाधिकार मात्रैको व्यवस्था गर्नुपर्ने भन्नुको अर्थ जमिनको उपयोग मात्रै गर्न पाउने तर सम्पतिको रुपमा राख्न नपाउने र वेचविखन गर्न नपाउने भन्ने हो ।
नेकपाको एकल बहुमत भएको सरकारका अर्थमन्त्रीको यस भनाइ देखिने बेला उग्रवामपन्थी र व्यवहारमा दक्षिणपन्थी विचार हो । नौ महिना पुगेको वर्तमान सरकारबाट जनता र कार्यकर्ता निराश हुनथालेको बेला र यसको दोष पन्छाउन सरकारमा रहेकाहरुबीच खिचातानी चलिरहेको वेला अर्थमन्त्रीको उक्त भनाइ आउनु अर्थपूर्ण रहेको छ । अर्थमन्त्रीले आफ्नो विविध कमजोरीहरु र बजेट बनाउँदा गरेको यथास्थितिवादी गम्भीर गल्तीलाई ढाकछोप गर्नु दुःखद् विषय हो ।
के जमिनमाथि निजी स्वामित्व भएकोले अहिले विकास नभएको हो ?जमिनमाथि निजी स्वामित्व भएकोले प्रत्येक विकास निर्माणका काममा धेरै मुआब्जा दिन परेकोले सरकारले विकास गर्न नसकेको हो ? अर्थमन्त्रीको यो आरोप सर्वथा किसानमारा आरोपबाहेक केही होइन र आफ्नो गल्ती कमजोरी ढाकछोप गर्ने गलत प्रयास मात्रै हो । यदि जमिनमा निजी स्वामित्व भएकोले मात्रै विकास गर्न कठिन हुने हो भने अमेरिका युरोपको विकास कसरी सम्भव भयो ?
वर्तमान अर्थमन्त्रीजीभन्दा पनि घनघोर क्रान्तिकारी लेनिन र माओले पनि किसानहरुको जमिनलाई विना उचित मुआब्जा राज्यको सम्पति बनाउने नीति बनाएनन् । लेनिन र माओले किसानहरुको जमिनलाई विनामुआब्जा जवरजस्ती हरण गरेर राज्यको सम्पति वनाउने कुराको जहिल्यै पनि विरोध गरे । वरु लेनिन माओहरुले त ठुला सामन्तवर्गले कब्जा गरेको जनता र राज्यको सम्पतिको रुपमा रहेको जमिनलाई फिर्ता लिने र राज्यको स्वामित्वमा लग्ने नीति लिए । साथै जसको जोत उसको पोत भन्ने नीतिलाई उनीहरुले लागु गरेर कमाइ खाइरहेका किसानहरुलाई जमिनको स्वामित्व दिलाए । यस्तो क्रान्तिकारी भूमिसुधारवाट करोडौं किसानहरुको जीवनस्तर उकास्न उनीहरु सफल भए ।
यहाँ ठूला सामन्तको रुपमा रहेका राजाको पचासौं हजार रोपनी जमीन राज्यको स्वामित्वमा आइसकेकोछ । तर अर्थमन्त्रीजीको ध्यान त्यसको सहि सदुपयोग गर्ने तिर छैन । अर्थमन्त्रीजी भने निमुखा वहुसंख्यक किसान जनताको एक मात्र सम्पतिको रुपमा रहेको जमिनमा आँखा गाड्न थाल्नु हुन्छ । यो त आम वहुसंख्यक किसानहरुलाई कम्युनिष्ट पार्टी र सिद्धान्तवाट पर धकेल्ने र वितृष्णा पैदा गर्ने उग्रवामपन्थी नारा मात्रै हो । यो माक्र्सवाद लेनिनवाद माओवादविरोधी उग्रवामपन्थ हो ।
मदन भण्डारीले जनताको वहुदलीय जनवाद दस्तावेजको ३.१० नम्वरको बँुदामा कृषि र जमिनको स्वामित्ववारे माक्र्सवादी विचारलाई नेपाली धरातलमा लागु गर्ने नीतिको ठोस खाका दिनु भएको छ । त्यसमा उहाँले भन्नुभएको छ कि क्रान्तिकारी भूमिसुधारको कार्यक्रम लागु गर्दै वास्तविक जोताहा तथा भूमिहीन किसानलाई भूमिको वितरण गरिनेछ, जमिनमाथि निजी स्वामित्व कायम गरिए पनि सहकारी खेतीलाई विशेष प्रोत्साहन दिइनेछ, भूमिमाथि स्वामित्वको नयाँ हदवन्दी कायम गरिनेछ, यसो गर्दा सामन्तहरुको जमिन विनामुआब्जा गरिव तथा भूमिहीन किसानलाई वितरण गरिनेछ, तर क्रान्तिको पक्षमा लाग्ने सामन्तवर्ग र धनी किसान तथा मध्यम किसानलाई भने यथोचित क्षतिपूर्ति दिइनेछ । तब कहाँवाट आयो विना मुआब्जा किसानको जमिन राज्यले लिएर विकास गर्ने कुरा ? कहाँबाट आयो किसानको जमिन राज्यको बनाएर किसानहरुलाई कंगाल बनाउने कुरा ?
अर्थमन्त्रीजीले मदन भण्डारीको न्युजविक पत्रिकामा निस्केको “इन नेपाल, कार्ल माक्र्स लिभ्स” शिर्षकको अन्तरवार्ता फेरि एकपटक पढ्नु पर्ने भयो । सो चर्चित अन्तरवार्तामा उहाँले भन्नुभएको छ कि सामन्तवर्गको जमिन लिएर जोताहा किसानहरुलाई वितरण गर्दा पनि मुआब्जा दिइनेछ । कहाँ मदन भण्डारी, कहाँ वर्तमान अर्थमन्त्रीको किसानमारा विचार ।
वर्ग विश्लेषण नगरी जमिन भएका जति सबैलाई राज्य र विकासको शत्रु ठान्ने अर्थमन्त्रीजीको चिन्तन उग्रवामपन्थको आवरणमा चरम दक्षिणपन्थी चिन्तन हो । उहाँले माक्र्सको कृति पूँजीको “प्रारम्भिक पूँजी संचय” शिर्षकमा उल्लेख गर्नु भएको पूँजीपतिहरु र वेलायतको तात्कालिन राज्यले किसानहरुमाथि जबरजस्ती जमिन वेदखली (जमिन खोस्न) का लागि गरेको बर्बर अत्याचारको चिन्तन बोक्नु भएको छ । अर्थमन्त्रीजीले माक्र्सको पूँजी एकपटक फेरि पढ्न पर्ने भयो ।
अहिले मुआब्जा दिन नसकेर विकास निर्माणको काम तीब्र नभएको होइन । विकास निर्माणलाई तीब्रता दिने सही नीति र योजनाको अभाव तथा भएका योजना पनि कार्यान्वयन गर्न असक्षमताले गर्दा त्यसो भएको हो । मुआब्जा दिन पैसा नभएर विकास रोकिएको होइन । पैसा भएर पनि खर्च गर्न नसकेर विकास तीब्रतामा नगएको हो । नचाहिने रवाफ देखाउन र अनावश्यक खर्च गर्न सक्ने तर विकास निर्माणको काममा खर्च गर्न गराउन नसक्ने अर्थमन्त्री र अन्य मन्त्रीहरुका कारण त्यसो भएको हो ।
दृष्टि साप्ताहिकबाट साभार ।।